तपाईंको चार-खुट्टाको चिसो निद्राको लागि कुत्ते बिडहरू। किनमेल मार्गदर्शक
सुरु औषधि पसल pet कुकुर बेड
1 कुकुरको बिस्तर - सजिलो, व्यक्तिगत र सुन्दर
2 कुकुरको बेड कुकुर टोकरी
3 कुखुराको बाडाको फ्याँक्ने बानी?
4 कुन कुकुरको लागि कुकुर बिजुली उपयुक्त छ?
5 कुत्तेको बिजुली कति ठूलो हुनुपर्छ?
6 कुकुरको बिरालो कुन सामग्रीमा पर्छ?
7 तपाईं कसरी कुत्ते बिस्तार सफा गर्न सक्नुहुन्छ?
8 कुन स्थान कुकुरको लागि उपयुक्त छ?
9 तपाईं आफ्नो कुकुरलाई बिस्तारमा कसरी भेट्नुहुन्छ?
10 कुकुरको बिरालो किन्ने बेला तपाई के विचार गर्नु पर्छ?
11 कुकुर किन्नको लागि निष्कर्ष
das कुकुर ओछ्यानमा - आरामदायक, व्यक्तिगत र सुन्दर
कुकुर आफ्नो अधिकांश समय सुत्ने बित्छ। त्यसो कि उनको मनपर्ने ठाउँ सोफे वा मालिक र मालकिनको बेड होइन, आफ्नै आफ्नै आरामको निलो स्थानको रूपमा लिनु पर्छ। त्यहाँ उसले पछाडि फर्काउन र एक पटक बन्द गर्न सक्छ। एक कुकुर ओछ्यानमा यसैले राम्रो तरिकाले तपाइँको कुत्ते को एक सुरक्षित फिर्ता र एक मा एक cuddly पसंदीदा ठाँउ को पेशकश को लागि एक तरीका हो।
कुकुर ओछ्यानमा पद कुकुर टोकरी
एक कुकुर ओछ्यानमा कुत्ते टोकरीमा धेरै उच्च र / वा निश्चित सीमा छैन, तर केवल एक कम मार्जिन। चूंकि कुकुरले आफ्नो जीवनको अधिकांश जीवन आफ्नो बिस्तारमा बिताउँछ, तपाईलाई खरीद गर्नु अघि उपयुक्त मोडेलको बारेमा सोच्नु पर्छ। कुत्तेको लागि मात्र उपयुक्त कुकुर ओछ्यानमा दायाँ स्थानमा आराम, लाउन्ड र विस्तार गर्न चार-लिङ्गमा निमन्त्रणा गर्दछ।
फायदहरू के हुन्? कुकुर बेड टोकरीको विरुद्ध?
तपाईंको चार-लिङ्ग गरिएको कुकुरको प्राथमिकताहरूमा निर्भर गर्दछ, कुकुरको विशेष बास्केटले टोकरीको विरूद्ध केही फाईदा हुन सक्छ। त्यसैले हो कुकुर बेड उदाहरणका लागि पुरानो वा बिरामी कुकुरहरूको लागि निम्न भन्दा कम फरक भएको कारण।
साथै विशेष गरी ठूला नस्ल र कुकुरहरू, तिनीहरू लामो समयसम्म विस्तार गर्न वा रातमा बदल्न चाहन्छन्, प्रायः एक हुन्छन् कुकुर ओछ्यानमा अझ राम्रोसँग एक संकीर्ण टोकरीमा राखिएको छ।
बिस्तारले कुकुरलाई यसको कमेन्टको पूर्ण दृश्य देखाउन अनुमति दिन्छ। यसकारण, आफ्नो विश्राम चरणको दौडान, उहाँले सधैं तिनको परिवारलाई हेर्नु भएको छ, बिना उनको टाउको ठूलो।
कुकुर बेड रतन वा अन्य सामग्रीको टोकरी भन्दा राम्रो सफा गर्न सकिन्छ। प्रायजसो अवस्थामा, तपाइँसँग हटाउन सकिने आवरण छ जुन वाशिंग मशीनको साथ सफा गर्न सकिन्छ। यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ भने तपाईंको चार-लिङ्ग बेग्लै बिरामी वा वृद्ध हुन्छ र त्यसैले एक घर हुन सक्छ।
र अन्तिम तर कम से कम छैन कुकुर बेड सामान्यतया सजिलै निर्माण र आफैंलाई अनुकूलित गर्दछ प्रत्येक प्रकारको बासिन्दा कोठामा। रंग, आकार र सामग्रीको छनौट विविध छ, त्यसैले हरेक स्वादको लागि उपयुक्त छ कुकुर ओछ्यानमा भेट्टाउन सकिन्छ।
कुन कुत्ता हो? कुकुर ओछ्यानमा लागि उपयोगी?
पहिले नै उल्लेख गरिएको रूपमा, यो प्रकारको सुटिङ सुविधा ठूलो, बुजुर्ग र बिरामी कुत्तहरूको लागि विशेष रूपमा उपयुक्त छ, किनभने तिनीहरू बढि र बेकारी बिना प्रवेश गर्न सकिन्छ। बिद्यार्थीले धेरै मात्रामा स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ र वरीयताको आधारमा पनि कठोर वा नम्रतामा पुर्याएको छ। यसले तल झर्काउन सान्त्वना बढाउँछ र यसरी तपाईंको चार-टाढाको साथीको सन्तुष्टि। शर्मीला र डरलाग्दो कुकुरहरू एक बन्द टोकरी वा उच्च पछाडिको बेडमा राम्रो देखिन्छन्, संतुलित सन्तुलित चार-खुट्टा कुकुर एक सेवानिवृत्ति हुन सक्छ जसबाट उनले आफ्नो सम्पूर्ण वातावरणमा आँखा देखाउन सक्दछन्।
त्यो कति ठूलो हुनुपर्छ? कुकुर ओछ्यानमा हुन?
कुकुरको बिरालोको लम्बाइ र चौडाई कुत्तेको आकारमा निर्भर गर्दछ। यो धेरै सानो वा धेरै ठूलो हुनु हुँदैन। उत्तम आकार तपाईंको चार-लिङ्ग गरिएको पशुको लम्बाइबाट गणना गरिएको छ। यो विस्तारित झूटो स्थितिमा कुर्सीको किनारमा राखेन कुकुर ओछ्यानमा मुठभेड। यद्यपि, तपाईं आफ्नो कुकुरलाई पूरै टिपबाट खिच्नु स्नेन्ट प्लस 10 सेन्टिमिटरसम्म पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि cot को सही आकार प्राप्त गर्न 20 30 सेन्टिमिटरमा थप्नुहोस्। यो कुकुरलाई राम्रो तरिकाले बाक्न र अनुमति दिन्छ, निद्रामा, सीमामा बाँधिएको बिना अन्डरुर घुमाउनुहोस्।
यदि तपाईं माप र गणना गर्दै हुनुहुन्छ कुकुर बेड तपाईं सजिलै निर्माताहरूको निर्देशनहरू पछ्याउन सक्नुहुन्छ किनकि धेरै मोडेलहरू उपयुक्त सिफारिसहरूसँग प्रस्तावित छन् र यस आकारको लागि उपयुक्त प्रजातिहरूको सूची समावेश गर्दछ। कुकुर बेड उपयुक्त छ।
कुन सामग्रीबाट कुकुर ओछ्यानमा खडा?
न केवल सान्त्वनाको लागी, तर स्वच्छताका लागि, तपाईंको चार-लिङ्ग जानको लागि बेडले सजिलो सफा सामाग्री समावेश गर्नुपर्छ। धेरै लोकप्रिय सामग्री जस्तै माइक्रोफिबर, पलिएस्टर वा कर्डुरा, साथसाथै अन्य आधुनिक मिश्रण कपडाहरू, आलु र साबर जस्ता सामग्रीहरू छन्। उच्च गुणस्तरका जीवनशैलीका प्रेमीहरू पनि उच्च-गुणस्तरका चमडाहरू वा अशुद्ध फर बनेका सामग्रीहरू प्राप्त गर्न सक्छन्, तर हेरचाह यहाँ राखिएको हुनुपर्छ कि कुकुर प्राय: गीला कोटसँग जोडिएको छैन, किनभने यो सामग्रीले दीर्घकालिक नमीलाई सहन गर्दैन। यसबाट पनि सफाई कुकुर बेड केवल हातले, यी बेडहरू अपवाद हुन्।
सही छनौट गर्दा कुकुर ओछ्यानमा तपाईलाई सम्बन्धित उत्पादनको भित्तामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। मानिसहरूमा जस्तै त्यहाँ पनि नरम वा कडा सुत्ने ठाउँहरूको प्रेमीहरू पनि छन्। यदि तपाईं आफ्नो कुत्ते अघि अग्रिम देख्नुहुन्छ भने, तपाइँ पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ कि तपाईंको कुन-लिङ्ग जनावरहरू मनपर्दो छ। के उनीहरूले नरम सोफेमा झूट बोल्छन्, वा उसले कुशनमा झिके? जोगोलिकल पसलहरूमा, तपाईं आफ्नो चार-टाढाको मोडेलको साथमा फरक मोडेलहरू पनि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
अक्सर, असबाब कुकुर बेड पलिएस्टरफ्लिसबाट, फोम फ्लेक्स वा स्ट्रोटोफोम क्षेत्रहरू।
पलिएस्टर फूलहरू व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, सस्तो र बेकार। तथापि, यो ढाँचा स्थिर छैन, किनभने नियम अनियमितताहरू विकास हुन्छ, जुन निद्रामा हस्तक्षेप गर्न सक्छ।
फोम सामग्रीको फ्लेक्सले समान गुणहरू छन् र यसैले दुर्भाग्यवश तुलनात्मक क्षति पनि छ। यद्यपि त्यो कुकुर ओछ्यानमा यस फुलरसँग धेरै cuddly नरम हुन सक्छ, यो एक लामो समयको लागि स्थिर रहँदैन।
अर्कोतिर स्ट्रोरोफाम बलहरू कुकुरको शरीरको आकारमा पूर्णतया फिट हुन्छ, तर तिनीहरूसँग हानिकारक हुन्छ जुन तिनीहरू दौडिरहेका हुन्छन्। दैनिक बिस्तारै बिस्तारै आवश्यक पर्दछ, किनकि कुकुरले बललाई धक्का पुर्याउँछ र कठिन फ्लोरमा निस्कन्छ। किनकि स्ट्रिरोपिक क्षेत्र लामो समयसम्म चल्दैन, अनिवार्य छ कुकुर बेड नियमित अन्तराल वा मोतीहरू एक्सचेंजमा यो भरने भरिएको। यो अधिग्रहण को बाहिर अधिग्रहण को बाहिर हुनु पर्छ, किनकी सानो बलहरु को कोठा मा वितरित गरिन्छ र कचौरा या कोनों मा कडा छडी छ।
थप आधुनिक कुकुर बेड कहिलेकाहीँ पनि भिसेज फोम वा लेटेक्सको बनावट भरी छ। यी सामग्री धेरै कठोर र व्यक्तिगत शरीर आकारमा अनुकूल हुन्छन्। मान्छे को आरामदायक गद्दाहरु लाई यस सामाग्री को मुख्य रूप देखि मिलिन्छ र यसैले उच्च स्तर को आराम को वादा गर्छन। यी सामग्रीहरू सार्न सक्दैन र यसैले इष्टतम दबाव राहत छ। दुर्भाग्यवश, यो हो कुकुर बेड केहि हदसम्म अधिक महंगी, एक खरीद, जुन चाँडै मुनाफा हुन्छ।
तपाईं कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कुकुर ओछ्यानमा सफा?
अधिकांश अवस्थामा, यो बेड कुत्तों को लागि बनाइन्छ ताकि उनि सजिलै संग निर्वाचित या ब्रश गर्न सकिन्छ। स्वच्छता कायम राख्न यो पनि आवश्यक छ। सानो झन्झटको लागि एक नम कपडा सामान्यतया पर्याप्त छ। तथापि, यो केहि मामलाहरुमा आवश्यक हुन सक्छ कुकुर ओछ्यानमा पनि राम्रो तरिकाले धुलाई।
भान्सा र बालुवा सफा गर्न एक भ्वाइस क्लीनर वा ब्रश प्रयोग गरेर कुकुर बेड त्यसकारण मिसिन द्वारा सफा गर्न सकिन्छ। विशेष गरी यदि कुकुरले गीला र गहिराइमा हिँड्नु पर्छ र उसको बिस्तारमा पछाडी पुग्छ वा पुरानो वा बिरामी हुन्छ, त्यसो गर्दा त्यो रोक्न सक्दैन, चार-लिङ्गको चोर हटाउन सकिने आवरण संग प्रदान गरिनेछ। यसले स्प्रिंग मेशिनलाई सम्भव बनाउँछ। ड्रायर प्रयोग गर्नु अघि, छोडिनु पर्छ। सामग्री स्पिलिज वा सिकारको जोखिम धेरै ठूलो छ। यसकारण, यदि तपाईं एक खरीद गर्नुहुन्छ भने फायदेमंद छ कुकुर ओछ्यानमा सुनिश्चित गर्नुहोस कि सम्बन्धित मोडेल को लागि प्रतिस्थापन कवर पनि हो।
कुन स्थान उपयुक्त छ कुकुर ओछ्यानमा?
कुकुरको बिस्तारको लागि सही सामग्री छान्नुको अलावा, स्थानले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अर्कोतर्फ, तपाईंको चतुर्थार्थताले निश्चित रूपमा स्विच गर्न सक्षम हुनु पर्दछ र त्यसैले सबै भन्दा ठूलो हलचल र हलचलमा सुत्न हुँदैन। अर्कोतर्फ, कुत्तहरूले आरामका चरणहरूमा समेत पूरा अवलोकन राख्न मनपर्छ र त्यसैले एक अस्पष्ट कुनामा निर्वासित गर्न चाहँदैनन्। यसैले सर्वोत्तम स्थान एक स्थानमा छ जुन कुकुरले सम्पूर्ण कोठा देख्न सक्दछ, तर बिना राती बिना। यो पनि सुनिश्चित गर्नुहोस् कि नाउ सिधै हेटरको अगाडि नै छ, न त सीधा सूर्यलाइट वा ड्राफ्टमा पर्दछ। दक्षिणी छेउमा एक ठूलो ग्रिड वा ठूलो सञ्झ्याल लामो सीधी लाइटको साथमा यो पनि ट्याब्लेट हुनुपर्छ। चूंकि कुकुर सधै तपाइँको जीवनमा भाग लिन चाहानुहुन्छ, कुकुर बेड नजिकैका स्थानहरू जहाँ तपाईं लामो समयको लागि बसिरहेका छन्, सोफा वा डेस्क। यसले कुत्तेलाई तपाईं नजिक हुन अनुमति दिन्छ र सधै प्रत्येक परिस्थितिलाई अनदेखी गर्नको लागी भावना छ।
कसरी उनको चप्पल बोक्ने कोसिस गर्नुहोस् कुकुर ओछ्यानमा?
अधिकतर अवस्थामा, सही साइजमा एक आरामदायक बर्थ र तपाईंको चतुर्थको उपयुक्त स्थान धेरै चाँडै स्वीकार गरिनेछ। तर puppies वा जवान कुकुरहरूमा पनि यो हुन सक्छ कि तिनीहरू नयाँमा एक्लै छैनन् कुकुर ओछ्यानमा र चाँडै तपाईंले हटाउनुहुनेछ। यदि तपाईं यो महसुस गर्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो नयाँ कुकुरको बिरालो आफ्नो मनपर्ने खिलौना वा उपचार राखेर बढी आकर्षक बनाउन प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। एक टेर्टिनजस्तो पहेंलो कपडा पनि, जो मालकिन वा मालको जस्तै गन्ध गर्छ, चमत्कारहरू हुन सक्छ। निस्सन्देह, तपाईले पनि आफ्नो पिल्ला लाई सीट जस्तै आधारभूत नियम दिनुपर्छ, ठाउँ र बसोबास यदि यो पहिले नै गरिसकेको छैन। यी आदेशहरूले तपाईंलाई दिनभरि तनाव मुक्त गर्न केवल न केवल मदत गर्दछ, तर कुकुरलाई तीव्र बनाउन पनि कुकुर ओछ्यानमा आम्दानी गर्न
तपाईले के गर्नुपर्छ कि? कुकुर ओछ्यानमा विचार?
जब खरीद कुकुर बेड तपाईलाई ध्यान दिनुपर्छ:
- बिस्तरको सही आकार, किनकि केवल यस तरिकामा तपाईंको कुकुरले सान्त्वना महसुस गर्नेछ र कुकुर ओछ्यानमा सुत्ने ठाउँको रूपमा पनि।
- सामग्री र यसको प्रसोधन, किनभने प्रयोग गरिएको सामग्रीको गुणवत्ता न केवल झूटो सान्त्वना र सेवा जीवन पनि निर्धारित गर्दछ।
- हटाउन सकिने र सजिलो खाली कवरको लागि सजिलो सफाई धन्यवाद। सफा कुकुर बेड न केवल सुन्दर छ, तर मानिसहरु र जनावरहरु को लागि अधिक स्वच्छ हो।
- बलियोपन। कुकुर बेड खरगोश प्रतिरोधी हुनुपर्छ, ताकि कुत्ता र मालिकले नयाँ निद्रा स्थानको आनन्द लिने र जंगली समकालीनहरूले यसलाई व्यक्तिगत भागमा विभाजन गर्न सक्दैनन्।
- fillers को आकार स्थिरता। सामान्यमा, अधिक महंगी कुकुर बेड , उच्च गुणस्तर असबाब हुनु पर्छ।
अन्डराइडमा एक पर्ची प्रतिरोधी इन्सुलेशन सामग्री कुकुरलाई असामान्य रूपमा फिसाउन रोक्छ कुकुर ओछ्यानमा प्रविष्टि वा पुन: प्राप्तिको समयमा।
मूल्य र प्रदर्शन उचित सम्बन्धमा हुनुपर्छ। सधैं महान् सबैभन्दा महान् बेड पनि तपाइँको कुत्तेको लागि उत्तम र उपयुक्त छ। इन्टरनेटमा मूल्यहरू तुलना गर्नुहोस् र छुटहरू र कुपन प्रचारहरूको फाइदा लिनुहोस्।
- स्वास्थ्य प्रभाव पनि दृश्यको क्षेत्रबाट बाहिरिनु हुँदैन। कुकुरहरू बूढो हुँदैछन्, केहि दुर्भाग्यवश पनि बिरामी हुन्छन् र पछिका रोगहरू वा हड्डी कंकालको पछि लाग्ने रोगहरू हुन्छन्। एक आर्थोपेडिक कुकुर ओछ्यानमा व्यक्तिगत भर्तिका साथ लागत गहन छ, तर तिनीहरू कुत्तेमा सज्जन हुन्छन् र दुखाइलाई मुक्त गर्दछ।
- केहि मोडेलहरू विशेष सहायक उपकरणहरू जस्तै अतिरिक्त तकियाहरू, एक थप कम्पास वा प्रतिस्थापन आवरण प्रदान गर्दछ। यी उत्पादनहरूको लागि धन्यवाद, पैसा पनि बचत गर्न सकिन्छ।
- को गुणवत्ता कुकुर बेड तपाई सधैँ उच्च मूल्य प्राप्त गर्नुहुन्न। तपाईंले किन्नु अघि, परीक्षक नतिजाहरू स्वतन्त्र संस्थाहरूबाट जाँच्नुहोस् र अधिक वा कम सन्तुष्ट ग्राहकहरूको विचार पढ्नुहोस्। यस तरिकाले तपाईं महंगी खरिदहरू रोक्न सक्नुहुन्छ।
को निष्कर्ष कुकुर बेड खरिद
एक कुत्ते दिन 20 घण्टा सम्म सुत्न वा डस्ट अप गर्दछ। तदनुसार, यो झूट बोल्न सहज हुनुपर्छ, त्यसैले सुत्न पनि एक आरामको प्रभाव हुन सक्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ गुणस्तर खरिद गर्नुहुन्छ र ब्रान्डेड उत्पादनहरू मनपर्छ कुकुर बेड Knuffelwuff देखि, Songmics र साथ ही मोर माउंटेन या Trixie। तपाईंको कुकुरको सुत्न र सुत्ने बानीहरू साथै बिस्तरको सही आकारको अवलोकन गर्नुहोस्। यसको अतिरिक्त, यदि तपाईं एक उपयुक्त स्थान पाउँनुहुन्छ भने, तपाइँको कुत्ताले बिना हिचकिचाहिँ बिस्तारलाई स्वीकार गर्नेछ र यसलाई मनपर्छ।
कुकुरको ओछ्यान, कुकुर तकिया, कुकुर टोकरी उल्टाउन सकिने तकिया, आकार एम, र gray खैरो / कालो
उच्च COMFORT फैक्टर। यो विशेष गरी नरम र cuddly कुकुर ओछ्यान कुनै घर मा हराउनु हुँदैन। नन-स्लिप pimples को साथ गैर पर्ची तल इष्टतम पकड र एक वास्तविक आँख क्याचर को लागी आधुनिक डिजाइन सुनिश्चित गर्दछ।
व्यावहारिक टेलि चलाउनुहोस्। दुई फरक सामग्रीबाट बनेको हटाउन योग्य भुई कुशनले यस टोकरीको आरामलाई उत्तम बनाउँदछ। तपाईंको कुकुरले उसको कुद्ली लुकेको प्रेमलाई माया गर्नेछ।
COMFORTABLE ENTRY। गहिरो प्रवेशले प्रवेश र बाहिर निस्कन सुविधा पुर्‍याउँछ। सबै आकारको कुकुरका लागि बाहिर निस्कनुहोस् र यसरी राम्रोसँग प्रबर्धन गर्दछ।
सजिलो सफा। यो कुकिया तकिया सफा गर्न धेरै सजिलो छ र हातले धुन्छ।
विविधता। इष्टतम छनौटको लागि, त्यहाँ विभिन्न रंग र आकारहरूमा हाम्रा कुकुर बास्केटहरू छन्। रंग ग्रे / कालो र आकार एम मा उपलब्ध छ, सटीक आयामहरू चित्रहरुमा देखाइएको छ।
Knuffelwuff 14097-015 कुत्ते बिस्तर कुत्ते टोकरी कुत्ते सोफे कुक कुश कुत्ता टोकरी कवर वाशिंग ठूला कुत्तों Xxl Lotte ग्रे सूचक
30 डिग्रीमा धोने योग्य हटाउन सकिने आवरण
Seperatly उपलब्ध प्रतिस्थापन कवर
कुकुरको बिजुलीको वेगबाट बनेको
ECO-TEX मानक 100
Leo4dog। सोफा सूर्य6आकारहरू,4रङहरू। कुत्ते बिस्तार, कुकुर कुशन, कुत्ता सोफा, कुत्ते टोकरी। (एम-80X60, ग्रेफाइट) प्रदर्शन
Leo4dog। सोफे एसयूएन।6आकारहरू,4रङहरू। कुत्ते बिस्तार, कुकुर कुशन, कुत्ता सोफा, कुत्ते टोकरी।
धेरै टिकाऊ र खरोंच प्रतिरोधी। कोटिंग: 88% पलिएस्टर, 12% नायलॉन
किरणहरू हटाउन सकिने र धोने योग्य छन्। 30-40 डिग्रीमा धुनुहोस्।
EU मा बनाइयो
बेडडग कुकुर ओछ्यान LUPI, Cordura को बनेको कुकुर सोफा, microfibre velor, धुलाई कुकुरको ओछ्यानसँग बोर्डर, कुकुर तकिया वर्ग, भित्रका लागि, बाहिर, XL, The-Rock, कालो-ग्रे प्रदर्शन
अमेजनमा अधिक मोडेल र सस्तो सौन्दर्यहरूको लागि, माथिको क्लिकमा Bed-Dog मा क्लिक गर्नुहोस्
आरामदायक र सुख्खा नरम: संयुक्त प्रविष्टि र स्पिन-स्पर्लिंग फोम फ्लेक्सबाट भरिएको भरिएको अनुकूल आरामको कारण, आराम प्रविष्टि
मजबूत, स्थिर कुकुर कुशन: टिकाऊ कुत्ते चटाईको साथ, खरोंच प्रतिरोध र पानी-विकर्षक सतह, आयामी स्थिर र गैर पर्ची बढ्यो
बहुमुखी: घर, कार वा बगैचा, आराम गर्ने वा कुकुरको सुत्ने ठाउँको रूपमा इनडोर र आउटडोर कुकुरको ओछ्यान
सजिलो हेरविचार पाल्तु जनावर ओछ्यानमा: सतह सजिलै चूसा र बन्द, कुकुर टोकरी 30 डिग्री मा धो देखि हटाउन सकिने जिप आवरण सखाप
सुपर कुशन एक्सएनयूएमएक्स कुकुर ओछ्यान कुकुर बास्केट कुकुर सोफा पाल्तु बिस्तर सानो, मध्यम र ठूला कुकुरहरूका लागि - धुने योग्य - आकार एल - कालो र खैरो - फ्याक्स पंजा पंजा
कुकुरका लागि ओछ्यान - साना र ठूला कुकुरहरूका लागि ठूलो सुविधा। हामी सुनिश्चित गर्दछौं कि जनावरको ओछ्यानहरू खरोंचहरू, च्यूईंग र ओसिलोसँग प्रतिरोधी छन्। यो घर वा बाहिर राम्रोसँग काम गर्दछ।
क्रिसमस पलंग लचकदार, आरामदायक र रमाईलो सामग्रीबाट बनेको छ जुन प्रयोगको समयमा विकृत हुँदैन। ओछ्यान बाक्लो छ र नरम सिलिकॉनले भरिएको छ। ओछ्यान शराबी ऊन को कपडा र पर्यावरण मैत्री जनावर सजावट कपडा संग भरिएको छ।
ओछ्यानको आराम सुनिश्चित गर्न, यो तकलो धुनु पर्याप्त छ 30 डिग्रीको तापक्रममा। घरपालुवा जनावरको कपाल सजिलै ओछ्यानबाट खाली गर्न सकिन्छ वैकल्पिक रूपमा, यसलाई पनि पुछ्न सकिन्छ। यी सबैले चार-खुट्टे मित्रहरूले लामो समयको लागि ओछ्यानमा रमाइलो गर्ने कुराको सुनिश्चित गर्दछ
आकार L -95x75 सेमी (XL - 120x90) - आयाम सहिष्णुता लगभग 5% छ। निर्दिष्ट आयाम कुल आकार हो - भित्री आयामहरू लगभग L-70x50 सेमी (XL -100x70 सेमी) हुन्छन्। यो आकार मध्यम आकारको कुकुरहरूको लागि आदर्श हो।
विशेष - एन्टी-एलर्जी, वाटरप्रूफ, एयर सर्कुलेशन। पानीमा तकिया उजागर गर्न रोक्नुहोस्, किनकि पानी भौतिक जडान बिन्दुहरूमा जान सक्छ!
FEANDREA धोउन योग्य कुकुर ओछ्यान, कभर हटाउन योग्य र मेशिन धुने योग्य, कुकुर कुकिया, खैरो 90 x 25 x 75 सेमी PGW11CC सूचक
तपाईंको FOUR लेगहरूका लागि एक OWN बीड: यस लक्जरी कुत्ते बिस्तारमा तपाईंको कुकुरले सम्पूर्ण परिवारको सदस्यलाई महसुस गर्नेछ।
आफ्नो डोगको लागि एक स्थानिय स्थान: यो पादरी र स्क्रैच-प्रतिरोधी कुत्ता चटाईमा तपाईको पाल्पा धेरै राम्रो महसुस गर्नेछ। राम्रो प्याडिंग र cuddly आलु बिस्तर को लागि धन्यवाद, तपाईंको कुत्ता एक आरामदायक ठाउँ हुनेछ जहाँ उसले राम्रो आराम गर्न सक्छ; पनि विरोधी-एलर्जीनिक
राम्रो प्रशोधन गर्दै: बिस्तरको किनारहरू उठाइरहेछ र राम्रोसँग ठोक्किएको छ ताकि तपाईंको कुकुरले उसको टाउकोमा यो आराम गर्न सक्दछ; यसको अतिरिक्त, सबै खण्डहरू ठीकसँग प्रशोधन गरिएका छन्; यसबाहेक, नेबहरूसँग गैर-पर्ची कपडाको तलले तपाईंको कुकुरलाई चिसो र नमीबाट सुरक्षित गर्दछ
कम आमाबाबुको साथ खाली: आवरण हटाउन सकिने र मेनु मेनु
100% संतुष्टि ग्यारेन्टी: FEANDREA अर्डर अघि र पछिको पेशेवर ग्राहक सेवा प्रदान गर्दछ। लामो विचार नगर्नुहोस् र केवल यसलाई हिट गर्नुहोस्!
क्याटाल्पा फ्लावर डग बिस्तर XXL कुकुर चटाई पालतु पलंग कुकुर सोफा डग कुशन धोउन योग्य 125 x 80 x 12 सेमीडिस्प्ले
कुकिरो तकिया पूर्ण रूपमा हटाउन योग्य कभर छ र 30 डिग्री सेल्सियस तक मशीन धुने योग्य छ।
70kg को लागी तौल जनावरहरूको लागि उपयुक्त।
तलको एन्टि-स्लिप कोटिंगको साथ उच्च गुणस्तर संसाधित
125 x 80 x 12 सेमी ठूलो जनावरको ओछ्यान बेजेज गैर बुनेको कभरको साथ पॉलिएस्टरले बनेको छ। लगभग सबै जीवित वातावरणमा उत्तम फिट गर्दछ।
आरामदायक र नरम, सुरक्षित, टिकाऊ, सफा गर्न सजिलो छ, तपाईंको घरपालुवा जनावरहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो।
URIJK डग बिस्तर कुकुर बास्केट धुने कुकुर सोफा को साथ एज कुकुर चटाई कुत्रा चटाई कुकुर निद्रा कुकुर पाल्तु कुकुर बिरालो बिस्तर आउटडोर र घर को लागी (एम, गुलाब रातो) प्रदर्शन
आकार: S, M, L, XL, XXL, 3XL, कृपया उपयुक्त आकार छनौट गर्नुहोस्
सामग्री: उच्च-गुणस्तरको कपास मखमल + बाइट-प्रतिरोधी अक्सफोर्ड + वाटरप्रूफ कपडा तल, भर्दै: त्रि-आयामिक पीपी कपास
डिजाइन: घरपालुवा जनावरलाई आराम गर्न र सुत्नको लागि मीठो र and र नरम डिजाइन
Dimensionally स्थिर कुत्ता बिस्तार: उठाएको किनाराले तपाइँको चार-लिङ्ग मित्रलाई सुरक्षा र टाउकोको लागि एक व्यावहारिक समर्थन प्रदान गर्दछ
प्याकेज अनुपालन: १ x कुकुर ओछ्यान, तपाईंको पाल्तु जनावरहरूको उपहारको लागि उत्तम विकल्प!
FEANDREA कुकुर ओछ्यान, कुकुर टोकरी उल्टो कुशन, कुकुर सोफा, कुकुर चटाई, आरामदायक, सास, नन-स्लिप, उठाएको किनारा, 80 x 60 x 26 सेमी, 15 किलोसम्म कुकुरका लागि, मोटेल्ड ग्रे PGW26GAnzeige
इभन डग्सले दावी गरेको छ: यदि तपाईंको कुकुर रातो ओछ्यानमा सुटुक्क जान्छ भने उसको सुत्ने ठाउँ अलि अप्ठ्यारो हुन सक्छ र उसले तपाईंलाई शान्त कुकुर ओछ्यानको लागि सचेत गराउन चाहन्छ
गार्जियस: कुकुर सोफाले किनारहरू उठाएको छ जुन तपाईंको पाल्तु जनावरहरूलाई ड्राफ्टबाट जोगाउँछन्। थप रूपमा, यो राम्रो प्याडेड छ, ताकि तपाइँको कुकुरले लामो हिँड पछि यसलाई सजिलो बनाउँदछ
पेट्रोलेम सामग्री: मखमली र रेशम कुकुरको टोकरीमा अनुपयुक्त छन्। प्रयोग भएको पदार्थ बरु बलियो हुनुपर्छ। त्यसकारण, यो कुकुरको चटाई टिकाऊ कपास-पॉलिएस्टर मिश्रित कपडाबाट बनेको थियो। भरिने पनि hypoallergenic हो
अनुग्रह वा ग्रे मा ग्रे? कुद्ली रिभर्सिबल कुशन एक तर्फ उज्यालो पीवी ऊनबाट बनेको छ, जसले न्यानोपन प्रदान गर्छ र कुकुरको टोकरीको खैरोको लागि यसको प्रभावकारी भिन्नता प्रदान गर्दछ। यदि तपाईं यस खैरो मन पराउनुहुन्छ, तपाईं तकिया पल्टाउन सक्नुहुन्छ र कुकुरको ओछ्यान सादा र ताजा छ
अझै सन्तुष्ट छैन? हाम्रो ग्राहक सेवा सधैं उपलब्ध छ। लामो विचार नगर्नुहोस् र केवल यसलाई हिट गर्नुहोस्!
कोइटा बिरालो ओछ्यान लवली पाल्तु बिस्तर, सानो कुकुर ओछ्यान पाल्तु बिस्तर पल्ट नरम गोल बिरालो सुत्ने बिस्तर (60० सेमी व्यासको हल्का खैरो) डिस्प्ले
नरम र तातो: पाल्तु जनावरको ओछ्यान cm सेमी लामो लम्बाई र कपासले बनेको हुन्छ। यो नरम र छालामैत्री छ र बिरालाको बच्चाको विभिन्न स्लीप आसनमा अनुकूल छ।
गैर पर्ची बेड आधार: घरपालुवा जनावरको ओछ्यानको तल पाल्तु जनावरको सुरक्षाको लागि गैर पर्ची कपडा प्रदान गरीन्छ।
उत्पादन आयाम: L * W * H 60 * 60 * 20 सेमी,9किलोग्राम घरपालुवा जनावर (१ .19.8 ..XNUMX पाउन्ड) भित्र वजनका लागि उपयुक्त पालतु पशुहरू।
सावधानीपूर्वक डिजाइन - घरपालुवा जनावरको ओछ्यानमा पाल्तु जनावरको टाउको र घाँटीको लागि उठाइएको किनारा हुन्छ र कुकुर र बिरालाहरूलाई जोड़ दुखाइ वा गठियाको समस्याबाट राहत दिन्छ।
जाडोमा उत्तम ओछ्यान: बिराला / बिरालाको बच्चा / कुकुरहरु र साना नस्लहरूका लागि उपयुक्त। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको घरपालुवा जनावरमा कोठामा आराम गर्ने, आराम गर्ने र आराम गर्ने कोठा छ।
अघिल्लो लेखएङ्गलर कुर्सी
अर्को लेखफिटनेस पङ्क्तिबद्ध मिसिनहरू